Maviri Kukadzi kufanoona. Iye wekutanga Cole uye akazvitsaurira Millás | Zvazvino Zvinyorwa
Maviri Kukadzi kufanoona. Doleant Cole uye akazvitsaurira Millás
Izvi previews mbiri zvichatengeswa ku Hafu yaFebruary. Vakatowira mumaoko angu uye gore rangu rekuverenga harina kutanga zviri nani. Ndezve Chidhori chemachira (Ragdoll), kubva kuBritish Daniel cole, iyo inoita kutanga kwayo kukuru mumhando nhema. Uye ichangoburwa kubva kune yakatsaurwa yemuno munyori Juan Jose Millás, Ngakurege kuva nemunhu anorara, iyo yakatora mazuva maviri chete. Nyaya mbiri vane zvakawanda zvakafanana zvinoita kunge. Ngatione.
2.1 Ngakurege kuva nemunhu anorara
3 Ivo vakafanana sei?
Izvo zvine 33 makore, anogara kuguta rekumaodzanyemba kwe Bournemouth uye ari paramedic. Izvi zvako yekutanga novel, iyo yakazvarwa muchimiro che script uye izvo zviri kutochinjiswa kuita nhepfenyuro yeterevhizheni. Izvo zvave zvakare iri bestseller ipapo ipapo muUK, France, Italy, Germany neHolland. Ari kunyora bhuku rake rechipiri.
Chitunha chakarembera padenga kuburikidza nedzimwe tambo, anonongedza chigunwe akananga kuwindow uye akaumbwa neiyo dzakasonwa zvikamu zvevatanhatu vakaurayiwa zvimwe. Muchina wokudhinda wakakurumidza kuutumidza kuti Ragdoll, chidhori chidhende, chinyararire kuwana mufurati isina chinhu mu London pane izvo ivo vakangokwanisa chete kuziva musoro. ¿Ndivana ani? vamwe vashanu vakaurayiwa? Uye nei munwe wacho uchinongedzera kuimba iri mhiri kwemugwagwa kubva ku Detective William Fawkes, iyo inozivikanwa nemunhu wese se bumhi?
Dzvinyiriro kubva kuvakuru vake Nyowani Scotland Yard nekushungurudzwa kwe media Vachaita kuti zviomere kwazvo Mhumhi inokasira uye ine hanya neboka rake mukuferefeta kwavo. Kumusoro pamusoro payo munguva pfupi inoonekwa runyorwa rwevatanhatu vanotevera vakaurayiwa akatongerwa kufa. Uye kupedzisa basa, mhondi inoita kunge inogara iri pamberi.
Ivo vatove vakaisa akawanda zvipikisheni zveakajairwa iwo: kuvaraidza, kupindwa muropa, nekushushikana uye adrenaline pasina zororo. Zvakanaka hongu, zvirokwazvo inokodzera ivo. Ini ndinongo wedzera kuti, sekuswedera kwandakaita kumagumo, ini ndaive nechishuwo chekusvika uye panguva imwecheteyo ndichivhara bhuku kuti ndimbomisikidza zvishoma. Iko kusanzwisisika uye kunozivikanwa kwekunzwa kunoratidza kweiyo nguva uye nguva yakanaka.
Ehezve, isu vedu vatove nemamili mazhinji mumatsotsi novel vanoziva pesvedzero kubva pano neapo. Mune ino novel ndakarangarira zvakaisvonaka Mapere kubva kuitaly Donato Carrisi. Kune zvakare zviwanikwa uye kutendeuka, zvinodikanwa uye zvakajairika mumhando iyi, izvo chaizvo nekuda kwechikonzero ichocho vachiri kushanda. Ini zvirokwazvo ndinorumbidza Jehovha kuguma kune njodzi, izvo zvichashamisa (kana kwete) zvinopfuura imwe. Inokusiira a mushure mekusava nechokwadi saka zvinoita kuti ufunge nezvehunhu hwako. Mukupedzisira, iwe unosarudza kungobvuma imwe yakanaka kwazvo nyaya, cinematographic uye yakasimba mavara.
Pane zvishoma zvinogona kutaurwa nezveValencian Millás. Makuru etsamba dzedu dzazvino, anokunda mibairo yakawanda (iyo Planet, the Nadal, iyo National Narrative, iyo Miguel Delibes ...) uye articulist uye mushandirwi mukati Nyika kana chirongwa Kurarama de la Cadena Ser.Uye munyori wemazita akadai se Bindu risina chinhu, Kusurukirwa kwaive uku, Guta o Usatarise pasi pemubhedha, pakati pevamwe vazhinji. Ngakurege kuva nemunhu anorara Iyo inoverengeka yake nyowani, ipfupi ndingati, uye inoverengwa chaizvo mukufema kumwe.
Ngakurege kuva nemunhu anorara
Nedudziro yezvakanaka aria ye Turandot, Opera yaPuccini, sezita rekuremekedza, ino nganonyorwa inosanganisa zvakajairika uye zvinonakidza, fananidzo neichoicho uye fungidziro, pfungwa uye kupenga. Iyo nyaya yerudo, kusurukirwa, kusagadzikana uye unyengeri, naivety uye irony uye yekuenderera kusagadzikana. Iri nyeredzi hunhu hwechikadzi husingaregi kusava nehanya. Uye ndezvekuti isu tese tinogona kunzwisisa saLucia pane imwe nguva kana mamiriro.
Uye ndizvo izvozvo Lucy Ndicho programmer yekomputa uyo anorasikirwa nebasa rake osarudza kuve tekisi mutyairi en Madrid. Nekudaro, nemukana kana mugumo uyo pamwe wainge wakamumirira kubvira aine makore gumi. Uye iye achave mutyairi wetekisi kuzokwanisa kutora muvakidzani wake rimwe zuva Braulio, uyo anonyangarika achangosangana uye waanotarisira kuwana nekuti adanana naye.
Kamwe chete, kurira kwehupenyu hwako hutsva kuchave Turandot, weiye anonzwa protagonist. Uye aria yake inozivikanwa kwazvo, nessum akarara (kuregera munhu arare), inogara ichingobvarura misodzi yese yemanzwiro makuru. Uye Lucia kwatiri. Nezve iro ramangwana rakasiiwa kumukana rakatakurawo kusurukirwa, zviroto, kunyepedzera uye kuora mwoyo kwakadzika ndiani ari pakati pevatengi vake mumigwagwa iyoyo yeMadrid.
Ivo vakafanana sei?
Ehe, ivo vakafanana mune izvozvo, kunyangwe zvavo zvakasiyana zvirongwa, ivo vaviri vanogovana mapoinzi matatu akafanana. Imwe, kushandiswa kwemaguta maviri makuru uye akanaka, London neMadrid, sezviitiko zvinozivikanwa (kana vakatsikwa, hongu) uye yakanakira kumisikidza chiitiko uye mavara nesimba guru. Aya mavara ipfungwa yechipiri nekuti zvinokuchengeta uchigara uchifarira. Uye iyo tercero ndeyekuti vanyori vese, vakasiyana kwazvo mu style, vanozvigovanawo mune yavo fluidity uye yakasviba kumashure kwayo yakajeka muCole uye tinged nedimikira muMillás. Uye vese vari vaviri vanotora njodzi ne magumo maviri akasimba uye anoshamisa. Saka ini ndinorevesa nemoyo wese kuverenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Maviri Kukadzi kufanoona. Doleant Cole uye akazvitsaurira Millás
Maitiro-ekumisikidza Matikitivha echikadzi: Petra Delicado
Nei bhuku piracy richifa mumakore gumi?